iPhoto Card: Samee Cards salaan on Mac isticmaalaya iPhoto Card dhise
Samee Cards Salaan ee Mac isticmaalaya iPhoto Card dhise
4.1 iPhoto for Windows l
iPhoto waa qayb ka mid ah Suite codsiga iLife ee intaa dheer in iMovie, iDVD, iWeb, iyo wixii la mid ah. Waxaa abaabuli karaan sawiro aad by Wajigooda, meelaha iyo dhacdooyinka. Waxa kale oo aad isticmaali karto si aad xaalkaa photos aad digital fudayd. Fikradaha ugu fiican waa in aad sii samayn kartaa sawiro, tusaale ahaan, buugga sawirka, kaararka salaan, jadwalka iyo boorsada jeebka sawir. Maanta, waxaad ku baran doontaa sida loo isticmaalo software Mac card Salaan si ay kaararka salaanta.
Qeybta 1: Sida loo sameeyo iPhoto Cards Salaan
Qeybta 2: More Software Salaan Card u Mac
Qeybta 1: Sida loo sameeyo kaararka iPhoto
iPhoto ma aha software kaadhka salaan fiican Mac, laakiin waa ay fududahay in la isticmaalo, iyo ma waxaad iska indhatiri kartaa kaararka letterpress qatarsanaa shakhsi la sawiro iyo qoraal. Diyaar ma u tahay inuu soo jiito? Hadda hoos ku arki ku saabsan sida loo sameeyo kaararka iPhoto.
Tallaabada 1. Samee Salaan Card iyo dooro mowduuc
Si aad u samayso kaarka salaan in iPhoto, talaabada u horaysa waa in guji ah "+" calaamad hoos Source List dooro Card ka mid ah liiska. Next riix badhanka ee kor ku xusan liiska mawduucyada dooro Salaan Card ka menu ka dhalanaya. Dooro mawduuc card salaan iyo riix Dooro button.
Si aad u iibsato kaarka Salaan ka Apple, waxaad riixi kara " Options + Qiimaha "button furi doonaa Print Products bogga internetka iPhoto ah, taas oo aad ku tusi doonaa faahfaahinta kaarka iyo macluumaad binta.
Tallaabada 2. Ku dar Photos iyo Qoraalka
In Windows Card ah, waxaad arki doontaa theme ee la doortay, iyo sidoo kale sawiro oo la soo doortay dusheeda. Si fudud u jiidi oo hoos u photos in kaarka salaan aad. Waxa kale oo aad ku dari karaysaa sawir ka Source liiska.
Bogga gudaha ee aad kaarka salaan aad u ogolaanaya in ay aqbasho qoraal. Riix sanduuqa qoraalka iyo nooca aad fariin gaar ah kaarka.
Tallaabada 3. Samee Settings Salaan Card
Waxaa jira goobo badan oo ay ku noqon kaarka salaan in la shakhsi, oo ay ku jiraan asalka card, design card, iyo nooca card. Riix badhanka Background hoose in la beddelo soo jeeda card. By default, kaararka salaan aad qabto nooca siman, ayaa sidoo kale la labiska soo jeeda, guji Orientation in ay u baddashaan nooca sawirka.
Inta badan mawduucyada card Salaan siiyaan hore iyo xagga dambe naqshado kala duwan. Si aad u aragto fursadaha hore / dib, xusho hore ama dambe ee kaarka ka dibna riix ka Design badhanka si ay u dejiyaan naqshado aad.
Tallaabada 4. Print ama gadato kaarka Salaan
Marka kaararka salaan aad diyaar u tahay, aad daabacan kartaa oo aad printer xiran iyo iyada soo gelin by mail. Haddii aad jeceshahay in aad email card Salaan, aad u dhoofin karaan sida file PDF ah iyo diri sida email lifaaqa. Si aad kaararka salaan cajiib ah, inaad si fiican u soo iibsan lahaa kaararka Salaan ka Apple. Habkan, aad heshay doonaa kaararka salaan aad ee 2-3 toddobaad. Waxaad booqan kartaa bogga internetka ee Apple ayaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan kaarka Salaan iPhoto, wax kasta oo ku saabsan iPhoto qaadashada kaarka ama dhalmada.
Inkastoo iPhoto kaa caawin kara inaad si fudud loo abuuro kaar, foomamka waa kuwo xadidan. Halkan waxaan ku qor software qaadashada kaarka Salaan kale oo Eebe inaad ka yeelataan doorashada iyo qaabka. Waxba ma ahan wixii munaasabadda yahay, software, kuwaas oo sidoo kale ku siin kara xal hal abuur leh.
Wondershare iCollage for Mac waa mid ka mid ah software ugu fiican card Salaan Mac, oo ay ka mid dheeraad ah oo la dhisay-in arrimo buugga sawirka, arrimo card salaan, ka badan iPhoto arrimo card. Arin kale waa in iCollage for Mac kuu oggolaanayaa inaad iskaa daabacan kaarka la printer ah. Sidaas, waxaad si fudud u dhigi kara kaararka aad.
# 2. Astaamaha Card Studio for Mac
Astaamaha Card Studio for Mac bixisaa kala duwan ee kaararka Salaan marto si aad u astaysto. Waxa kale oo kuu ogolaanaya in aad ku abuuri karto design gaar ah ka xoq. Si fudud aad ka heli kartaa kaarka munaasabadaha kala duwan iyo in la beddelo haya- si ay u astaysto.
# 3. Shop Print ayaa
Shop Print ayaa waxaa ka buuxa tan oo qoraalka fudud iyo qalabka khariidad, clip farshaxanka xiiso leh oo lagu furdaamiyo, iyo qalabka tafatirka sawir weyn - wax kasta oo aad u baahan tahay si aad kaararka salaan u gaar ah oo keliya daqiiqo.
Qaabka Error CF Card? Xalin! - Ladnaansho xogta ka Error CF Card
Top 10 xusuusta FREE software kabashada card
Sidee inuu ka soo kabsado files tirtiray ka card SD si degdeg ah oo ammaan ah
Sidee inuu ka soo kabsado files tirtiray ka kaadhka xusuusta ee mobile
Best Recovery Card XD Software
Kabashada Card VS Wondershare Data Recovery, waxa aad ugu jeceshahay?
XD Card Recovery inuu ka soo kabsado Khasaaray Xogta laga XD Card
> Resource > Memory Card > Samee Cards Salaan ee Mac isticmaalaya iPhoto Card dhise